Arsenal oo dhabar jab kala kulantay xiddig ay doonayeen inay ku badalaan Aubameyang – Gool FM
(London) 08 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa baadi goob ugu jirtay inay hesho weeraryahan baddel u noqda Pierre-Emerick Aubameyang, kaasoo lala xiriirinayo ka tagista garoonka Emirates Stadium.
Gunners ayaa dhabar jab kulul la kulantay kaddib markii uu Odsonne Edouard – oo bartilmaameed u ahaa – uu wada hadallo heshiis kordhin ah la furay kooxdiisa Celtic.
22-jirka reer France ayaa 27 gool u dhaliyay kooxda heysata horyaalnimada Scotland, isagoo caawin ka geystay 19 kale dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan.
Bandhigga cajiibka ah ee Edouard ayaa soo jiitay xiisaha kooxaha England ka dhisan ee Leicester City iyo Wolves, si la mid ah kooxda Arsenal.
Balse tababaraha Celtic ee Neil Lennon ayaa qalbiga ka jabiyay kooxaha doonaya weeraryahankiisa, waxaana uu xaqiijiyay inay wada hadallo heshiis kordhin ah ay la billaabeen wakiilkiisa.
waxaana uu sidoo kale Lennon hoosta ka xarriiqay in Edouard uu ku faraxsan yahay kooxda Celtic, sidoo kalena xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo labadooda.
Kooxda Macallin Mikel Arteta ayaa ka walaacsan mustaqbalka Aubameyang kaasoo dhici doona xagaaga dambe, waxaana ay kala dooran la’dahay Arsenal inay xagaagan suuqa geyso si ay kaash kaga hesho iibkiisa, ama inay heystaan sanad kale kaddibna xagaaga dambe uu bilaash kaga tago marka heshiiskiisu uu dhammaado.
30-jirka reer Gabon ayaa lala xiriirinayaa u hayaamidda kooxo ay ka mid yihiin Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Inter Milan.